पत्रकार लक्ष्मी पुनले सरकारले वितरण गरेको तक्मा फिर्ता गर्ने ! – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारपत्रकार लक्ष्मी पुनले सरकारले वितरण गरेको तक्मा फिर्ता गर्ने !
पत्रकार लक्ष्मी पुनले सरकारले वितरण गरेको तक्मा फिर्ता गर्ने बताएकी छन्। उनले सरकाले वितरण गरेको तक्मामा नेपालको नक्सा पुरानै राखिएको भन्दै तक्मा फिर्ता गर्ने बताएकी हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा विभिन्न मानपदवी, अलङ्कार र पदकबाट सुशोभन गरेकी थिईन। नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विभूषण प्रदान गरिदै आएको छ। सरकारले प्रदान गरेको उक्त पदकमा भने सरकारले गत वर्ष अनुमोदन गरेको चुच्चे नक्सा सहितको नयाँ नक्सा राखिएको छैन।
तर यस विषयमा गृहमन्त्रालयले भने, यो पोहोर सालकै पदक रहेको र पोहोर पदकमा पहिल्‍यै छापिएर आइसकेकाले चुच्चे नक्सा सहितको नयाँ नक्सा राख्न नमिलेको दाबी गरेको छ। गृहमन्त्रालयका अनुसार पदक लिन बाँकी रहेकाहरुलाई वैशाख १ गते नयाँ नक्सासहितको पदक प्रदान गरिने छ।
पदक पाउनेहरुले उक्त पदक सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि उक्त विषयले चर्चा पाइरहेको हो। पदकमा नक्सा पुरानै देखिएपछि आलोचना भएको थियो। पत्रकार पुनले आफु जनयुद्ध कालमा बच्चा च्यापेर गणतन्त्र रेडियोमा गरेको जनपत्रकारिताको सम्मान स्वरुप राज्यले सुशोभित गरेकामा हर्सित भएको बताउदै तक्मामा पुरानै नक्सा देखेर मन कटक्क खाएको बताईन। उनले जुन गणतन्त्रको लागी लडेको हो त्यसको सम्मान नभएको पनि बताईन। उनले भोली पदक फिर्ता बुझाउने निधो गरेको पनि उल्लेख गरेकी छिन।
उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्:
तक्मा फिर्ता गर्ने विषयमा !
प्रिय अभिभावक, साथीहरु तथा शुभचिन्तक !
जनयुद्ध कालमा बच्चा च्यापेर गणतन्त्र रेडियोमा गरेको जनपत्रकारिताको सम्मान स्वरुप राज्यले मलाई सुशोभित गरेको भन्दै म निकै हर्षित थिए। महामारीका कारण एक वर्ष ढिला हस्तान्तरण भएको तक्मा पाए। राष्ट्रपति निवासमा तक्मा गलामा झुण्डाएर जलपान र फोटोसेसन मा व्यस्त भइयो। कोठा पुगेर बल्ल त्यता नजर गयो। मन कटक्क खायो। जुन गणतन्त्रका लागि लडेका थियौं, त्यसको सम्मान भएन जस्तो लाग्यो। माया गर्नेहरूको बधाई शुभकामना ओइरी रहेको थियो। सबै प्रति नतमस्तक तथा आभारी छु। तर जानकारी गराउन चाहे, सच्चिएर चुच्चो सहितको तक्मा आयो भने मात्रै ग्रहण गर्ने छु। भोलि गृहमा बुझाउने निधो गरे।